Ifektri Yabantu Abadala Isikuta - Abakhiqizi Bama-Scooter Abadala, Abahlinzeki
I-Adult Scooter JBHZ 52
Sizigwema ngamabomu lezi zimo ngoba lapho zingama-scooter alula, akuvamile ukuthi zithole inani lemali. Uma uhlela ukusebenzisa amakhulu amadola, lapho-ke ungahle ukhethe isikuta sikagesi.
Ngiphakamisa ukuthi uphinde uhlole izikuta ezihamba phambili zikagesi zabantu abadala. Zibiza kakhulu, kepha kumnandi ngempela ukushayela uzungeze futhi ngeke kubandakanye ukukhahlela kwakho.
Okwalabo abahlala behamba behla emsebenzini ngesithuthuthu, mhlawumbe izinto zokuhamba zomphakathi
Inesisindo esingu-5.1 kg kuphela, futhi iyagoqeka ngokushesha okukhulu futhi kalula, okusho ukuthi akumele ube nankinga yokuyiphatha nawe.
Amasondo alesi sikuta esidala anobubanzi obungu-180mm, okusho ukuthi ahlinzeka ngozinzo olumangalisayo.
Idizayini yabo nayo ihlala isikhathi eside kakhulu, okusho ukuthi noma ngabe usebenzisa amasondo e-PU nsuku zonke, la masondo angahlala isikhathi eside.
Ubungako bamasondo buzophinda buqinisekise ukuthi lesi sikuta siyashesha futhi siguquguquka kunezinye izithuthuthu eziningi ezifanayo emakethe
Lesi sikuta esikhethekile sabantu abadala sihlangene kakhulu. Njengoba ukwazi ukubona esithombeni esingezansi, inesibambo esingaguquguqukayo futhi isibambo singafakwa kuso. Umshini wokugoqa ubushelelezi futhi unamandla amakhulu.
I-Adult Scooter JBHZ 56
Ukuphakama isikuta adjustable
Lesi sikuta se-JBHZ-56 singasekela isisindo esiphezulu esifinyelela kuma-180 amakhilogremu. Isibambo sinokulungiswa okukhulu, empeleni, noma ngubani kusuka ezinganeni kuya kubantu abadala angakusebenzisa.
Okunye okuvelele kakhulu kwalesi scooter, nesizathu sokuthi kungani sisifake kulolu hlu, kungenxa yokuthi i-absorber yokushaqeka ingeyesibili kunalutho.
JBHZ-56 ukuphakama scooter adjustable ukuma
Ungawela indawo emangelengele futhi ungazizwa lutho. Ngisho namasondo anamabheringi asezingeni eliphakeme akhelwe ngaphakathi ukusiza ukuqinisekisa ukuhamba okulula kakhulu.
Ama-handlebars wesikuta abambelele ngokuqinile, okusho ukuthi uma ushayela endaweni enamaqhuqhuva, ngeke ukuzwe kunyakaza izinto ezisindayo.
Esinye sezici eziwusizo kakhulu uhlelo olubamba amabhuleki olubili. Abantu abaningi bebelokhu begibela izithuthuthu, kodwa bathola ukuthi badinga ukwehlisa ijubane ngokushesha.
Isikuta Sabadala JBHZ 54
Imvamisa, kungaba inqubo ehlanganisiwe ukushaya ngokushesha ukubopha emuva, ikakhulukazi uma ungasebenzisi inqubo enhle yokugibela. Lokhu ngeke kube yinkinga ngalesi sikuta sokukhahlela.
Akugcini lapho une-brake yakho ejwayelekile esondweni elingemuva, kepha kukhona ne-brake yesandla eyakhelwe kusibambo, esivumela ukulawula okukhulu kakhulu kwalesi sikuta esikhahlela abantu abadala.
Kufanele kube nesikhala esanele emphemeni ukukunikeza isikhala esanele sezinyawo zakho, noma ngabe zinkulu kangakanani. Lesi sikuta i-JBHZ-04 kalula nje ngesinye sezithuthuthu esinethezekile emakethe ongasigibela, futhi ngeke udumazeke ngolwazi lwakho.
Isikuta Sabadala JBHZ 53
Empeleni lesi kuzoba yisikuta sokukhahlela sabantu abadala esishibhile kulolu hlu, kepha lokho akusho ukuthi siyisithuthuthu esibi, hhayi nganoma imuphi umqondo.
Lokhu futhi kungenye yezikuta ezikhahlela abantu abadala ezikulolu hlu ezingadingi ukuhlangana kunoma ngubani. Vele uyikhiphe ebhokisini bese ulungele ukuhamba.
Lesi sikuta senziwe nge-aluminium esesilinganisweni sezindiza okusho ukuthi isisindo esilula ngendlela exakile, kodwa futhi sisho ukuthi sakhiwe ukuze sihlale isikhathi eside. Kwenziwe kwaba khona ngohlaka lwayo lwe-aluminium.
Yize ngokuvamile kunganconyiwe, unganikeza kalula lesi sikuta esidala ukungqongqoza okumbalwa futhi sizophuma singazi lutho ekugcineni.
I-JBHZ-03 yakhelwe umuntu omude. Unokulungiswa okuningi kokuphakama kuma-handlebars, okwenza kube lula ukugibela. Amasondo amakhulu ahlinzeka nokuqina okukhulu komuntu 'osindayo' laphaya.
Isikuta Sabadala JBHZ 51
Isikuta seKick 2-Wheel Kicker esingasindi, iBlack Sturdy T-bar eneziphatho ezithambile zokubamba inokulungiswa kokuphakama oku-3 okukhiya kalula endaweni okubamba khona nokubamba okungahambisi kunikeza ukuhamba okunethezekile futhi okuphephile Okuhlonywe ngohlelo lokugoqa olunelungelo lobunikazi oluwela kalula ukuze kube lula ukugcinwa nokuthuthwa Idokodo le-aluminium eliqinile lifaka i-anti-slip grip tape leyo.
Isikuta Sabadala JBHZ 55
I-JBHZ-55 ifakwe amasondo amakhulu angama-200mm, enziwe ngokuqina okuphezulu ne-polyurethane esezingeni eliphakeme, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuhamba ezindaweni ezimbi.
I-JBHZ-55 yabantu abadala isithuthuthu esisodwa
Ngempela zikulungele kakhulu ukugibela okunamaqhubu. Uma omakhelwane bakho "" beqhosha "" ngaphansi kwalezi zimo, khona-ke i-JBHZ-55 nakanjani iyindlela okufanele uhambe ngayo.
Le modeli ibuye ibe ne-brake yangemuva exhunywe kwi-handlebar nge-lever, ngakho-ke uzozizwa uphephe kakhulu lapho ulawula isithuthuthu kusuka ku-barbar.
Futhi inezivikelo zodaka, ezingakuvikela wena kanye ne-scooter uqobo ekuchaphazeleni odakeni noma ezindaweni ezimanzi, kepha uma uyinyathela ngonyawo lwakho, ingasetshenziswa futhi njengokuphumula.
Isikuta Sabadala JBHZ 57
Isikuta siyaphatheka kakhulu. Impela, cishe ngeke islayidi esikhwameni sakho noma okunye okunjalo, kepha abaklami bakubonile lokhu. Uhlelo lokugoqa lukuvumela usonge isikuta ngemizuzwana nje bese usigqoka ehlombe lakho, usebenzisa ibhande lehlombe.
Abantu abasehlangothini olusindayo, ngenkathi begibele lokhu basazothola ukuthi isikuta siyakwazi ukuwela phansi ngejubane elikhulu, okusho ukuthi isikuta sikulungele ukuhamba kwakho kwansuku zonke noma ngabe ungubani.
Okubi kuphela kulesi sikuta iqiniso ukuthi kuthatha ukusetha kancane ngaphandle kwebhokisi. Kepha, noma kunjalo, kumane nje kuqinisa izikulufu ezimbalwa futhi uzobe usukulungele ukushaya imigwaqo yanoma yikuphi lapho uhlala khona.